बाट प्राकृतिक सामाग्री विभिन्न शिल्प को विशाल संख्या उत्पादन गर्न सक्छन्। यस लेखमा तपाईं पत्ता जो देखि यो एक पोथे्र दम्सी हुन सक्छ हुनेछ। यो रोचक काम बच्चाहरु संग सँगै गर्न सकिन्छ, यो आफ्नो कल्पना र विकास हुनेछ ठीक मोटर कौशल।
को शंकु देखि आफ्नै हातले एक पोथे्र दम्सी कसरी बनाउने?
यसलाई पर्याप्त सरल छ। काम गर्न तपाईं एक गांठ, पाइन को ड्राई सुई, एक सानो माटो र आवश्यक मरिच मटर। सबै को पहिलो तपाईं हेज हग सुई गर्न आवश्यक छ। plasticine एउटा सानो टुक्रा बीच केही पाइन सुई बन्धन। अर्को, अन्धो माटो पोथे्र दम्सी थूथन देखि मानिस। नाक रूपमा, एक मटर मरिच लिन। peppercorns भने तपाईं, plasticine बाहिर टोंटी गर्छन्। pinecone Prilep सुई-spikes द्वारा। यो हेज हग ढाड तिनीहरूलाई रहन, माटो जामुन र मशरूम देखि ढाला गर्न सकिन्छ। यदि सम्भव छ भने, यी जामुन Prilep, जस्तै rowan। यहाँ र तयार पोथे्र दम्सी।
बीउ र माटो वा plasticine को भेद
कसरी बाहिर एक पोथे्र दम्सी बनाउन , प्राकृतिक सामाग्री जस्तै बीउ र माटो (plasticine) को रूपमा? यो धेरै सरल छ! यो गतिविधि बच्चाहरु मोटर कौशल, ध्यान र धैर्य को विकास को लागि उपयुक्त छ। यो plasticine वा माटो बाहिर एक पोथे्र दम्सी को शरीर मद्यपानोत्सव गर्न आवश्यक छ। यो को तेज अन्त मा तपाईं बीउ रहन आवश्यक छ। नाक र आँखा कालो, peppercorns वा plasticine बाहिर बनाउन सक्छ। यो धेरै प्यारा पोथे्र दम्सी बाहिर जान्छ।
अनाज र nutshells
थप हामी तपाईंलाई देखाउने छौँ कसरी अनाज र ओखर गोले प्रयोग प्राकृतिक सामाग्री देखि एक पोथे्र दम्सी बनाउन। यो पोथे्र दम्सी माटो र बीउ भन्दा पनि सजिलो बनाएको छ। यसलाई बनाउनको लागि, तपाईं आधा संक्षेप, अनाज, गोंद, मरिच को पोल्का डट्स र आँखा आकर्षित गर्न कालो मार्कर आवश्यक छ। नाक खोल को तेज किनारा मा फँस। आँखा आकर्षित। को खोल सतह मा गोंद ढाकिएको र अनाज संग छिडकना छ। र तपाईं विभिन्न आकार को गोले चयन भने, तपाईं hedgehogs को एक पुरा परिवार बनाउन सक्छ।
र केही थप विकल्प
पत्थर, चामल, गोलियां, माटो, प्रयोग प्राकृतिक सामाग्री बनेको, हेज हग कसरी गर्न सिक्न शरद ऋतु पात, acorns र twigs, तपाईं हाम्रो लेख देखि थप सिक्न हुनेछ। सही आकार र आकार को पत्थर टिप्न हिड्ने गर्दा, पत्थर, र भात मा एक राम्रो प्यारा hedgehogs बनाउने। उहाँले एक पोथे्र दम्सी जस्तो पत्थर razrisuy। यो सुक्खा छ, यो अघिल्लो embodiment, अनाज मा जस्तै तरिका मा चामल अनाज को सतह लागू गर्न सकिन्छ।
शरद ऋतु मा तपाईं hedgehogs ओखर गर्न सक्नुहुन्छ। यो उद्देश्य लागि, दूर ओखर नै र बोक्रा रूपमा। तपाईं अझै पनि एक कटुस र साना शाखा देखि एक पोथे्र दम्सी बनाउन सक्छ, तर यो थप अरोचक काम हो। यो उपयोगी छ हुनत बच्चाहरु लागि राम्रो मोटर सीप विकास र लगनशील भई लागिरहेमा। Twigs सुई रूपमा fastened, plasticine बनेको कटुस नाक र आँखा बनाउन। तपाईं माटो खुट्टा देखि पनि sculpt गर्न सक्नुहुन्छ। यो embodiment माटोलाई रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अझै पनि कहिलेकाहीं शरद ऋतु पत्ते को उल्लेखनीय hedgehogs प्राप्त पतन। कम्तिमा एक पटक एक पैदल पछि बच्चाहरु संग फिर्ता, तर तपाईं घर पात को एक गुच्छा ल्याए। तिनीहरूलाई फेंक हतार छैन, एक सुन्दर पोथे्र दम्सी बनाउन सक्छ। आँखा बंद माटो वा हेज हग लागि plasticine शरीर बाट र तिनीहरूले thorns जस्तै बाहिर फँस भनेर यसलाई छोड्छ समाधान। आँखा र नाक कालो peppercorns वा सानो बनाउन सक्छ माटो को बलमा।
यो लेख देखि, तपाईं प्राकृतिक सामाग्री देखि एक पोथे्र दम्सी कसरी बनाउने सिके। यो जानकारी बच्चाहरु छन् भने तपाईं निश्चित सजिला मा आउनेछ। हस्तशिल्प बनाउन शुभकामना।
खरायो गरेको खुट्टा के लागू हुन्छ? को शुभंकर को विशेष सुविधाहरू
नायलन को पाठो: मूल स्मृति चिन्ह को उत्पादन मा एक मास्टर वर्ग
बुना भयो कपडा मा कढाई कसरी गर्न
अभिकर्मकों जो बिना यो रसायन अध्ययन गर्न असम्भव छ, पदार्थ हो
घरेलु आविष्कार - कुदाल "Krot"
अंगूर बीउ तेल कसरी बनाउने। लाभ र अङ्गुरको तेल को हानि
इजरायल यात्रा। Herzliya - एक फैशन रिसोर्टमा
हामी कसरी plasticine कार देखि sculpt गर्न बुझ्न